Walter Cronkite (1916-2009) | ကိုသင္ကာ . . . . Ko Thinker
← Who Really Killed Aung San? (Documentary)
Book Review: Khin Khin Htoo’s Upper MM Illustration →
July 17, 2009 · 9:29 pm
ဝေါ်လ်တာ ကရွန်းကိုက်ကို မြန်မာတွေတော့ ရင်းနှီးလှမယ်မထင်ပါဘူး။ အမေရိကန်အတွက်တော့ ရာစုနှစ်တစ်ခုစာလောက် အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဂန္ထဝင်ဂျာနယ်လစ်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ စီဘီအက်စ်ရုပ်သံမှာ သတင်းတင်ဆက်သူအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီမနက်အိပ်ယာနိုးနိုးချင်းမှာတော့ အသက် ၉၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဂန္ထဝင်ဂျာနယ်လစ်ကြီး ကွယ်လွန်ပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းသာ သတင်းဌာနတွေမှာ လွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ ဦးသန့်နဲ့ တွဲရိုက်ထားတဲ့ အဖြူအမည်း ဓာတ်ပုံကိုလည်း စီအန်အန်ရုပ်သံမှာ မြင်လိုက်ရပါတယ်။
ဝေါ်လ်တာ ကရွန်းကိုက်အကြောင်းကို ရေးထားတဲ့ A Reporter’s Life ဆိုတဲ့ စာအုပ် ရှိပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကို ကျောက်ဘီလူးတင်မောင်ဆွေက “ကမ္ဘာကျော်သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ စွန့်စားခန်းများ”ဆိုပြီး ဘာသာပြန်ကာ ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန်စင်တာက ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ စီစဉ်ထုတ်ဝေထားတာရှိပါတယ်။ မြန်မာဂျာနယ်လစ်မျိုးဆက်သစ်တွေဟာ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ဘာသာပြန်တဲ့ “ကွိ”ကို အနည်းဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တော့ ဖတ်သင့်တယ်ဟုဆိုလျှင် ကရွန်းကိုက်အကြောင်း ဘာသာပြန်ကိုပါ ဖတ်သင့်သည်ဟု ဖြည့်စွက်ချင်ပါတယ်။ သူရဲ့ ဂျာနယ်လစ်အဖြစ် ဖြတ်သန်းလုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတွေမှာ ဂျာနယ်လစ်နောက်ပေါက်တွေအဖို့ အတုယူ အားကျစရာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အရီဇိုးနား စတိတ် တက္ကသိုလ်မှာ Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication ဆိုတဲ့ စာနယ်ဇင်းသင်တန်းကျောင်းရှိပါတယ်။
သူရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ထဲက “အနာဂတ်မီဒီယာ”ဆိုတဲ့ အခန်းကို စာနယ်ဇင်းပညာ စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် စကန်ဖတ်ပြီး ကျနော် ပြန်လည် ဝေမျှထားတာ ဒီမှာ (Click Here) ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ချက်။ ။ ကမ္ဘာကျော်သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ စွန့်စားခန်းများ စာအုပ်ကို ပေးဖတ်တာ မတူးတူးသာပါ။ ဝေါ်လ်တာ ကရွန်းကိုက် ဆုံးပြီဆိုတဲ့ သတင်ကြားရင် စာအုပ်စင်မှာ အဲဒီစာအုပ်ကို မတူးတူးသာ ရှာနေမလားတော့ မသိပါဘူး။ တကယ်တော့ အဲဒီစာအုပ်က ကျနော့်ဆီမှာပဲ ရှိသေးတယ်၊ ပြန်မပေးရသေးပါကြောင်း။
5 responses to “Walter Cronkite (1916-2009)”
အစ္ကိုေျပာလို႔ သိရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါဗ်ာ ရွာဖတ္လိုက္ဦးမယ္ အစ္ကိုေရ
စာအုပ္ျပန္ေပးေတာ့ …. ဒါပဲ
စီေဘက္စ္မေတြ ့လို ့ဒီမွာေရးသြားတာပါ-
ကြၽန္ေတာ္ အျဖစ္ခ်င္ဆံုးက journalist ပဲဗ်။ ဒီစာအုပ္လည္း ငယ္ငယ္တုန္းက ဖတ္ဖူးတယ္။ အခု ျပန္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါဦးမယ္။ လာလည္သြားတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ။